.အခြေခံပညာ အတန်း သုံးတန်းကို သင်ရိုးသစ် ပြောင်းလဲ၊ ကိုဗစ်ပေါ် မူတည်ပြီး ကျောင်းများပြန်ဖွင့်မည်. – Askstyle
.အခြေခံပညာ အတန်း သုံးတန်းကို သင်ရိုးသစ် ပြောင်းလဲ၊ ကိုဗစ်ပေါ် မူတည်ပြီး ကျောင်းများပြန်ဖွင့်မည်.
အခြေခံပညာ အတန်း သုံးတန်းကို သင်ရိုးသစ် ပြောင်းလဲ၊ ကိုဗစ်ပေါ် မူတည်ပြီး ကျောင်းများပြန်ဖွင့်မည်
အခြေခံပညာ Grade-5၊ 8၊ 11 အတန်းများအတွက် သင်ရိုးသစ်များကို ပြောင်းလဲရေးဆွဲ ထားပြီး သင်ပြမည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် သင်ပြနည်းသင်တန်း ကို Face to Face Training နှင့် အွန်လိုင်း Training များဖြင့် ကပ် ရောဂါအခြေအနေအရ ဖွင့်လှစ် မည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုး သိမ်းကြီးက ပြောပါတယ်။
ပဉ္စမတန်း (Grade-5)၊ အဋ္ဌမတန်း (Grade-8)၊ ဧကာဒသမတန်း (Grade-11) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်များကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဂျပန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA)၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်(ADB)၊ ဥရောပသမဂ္ဂ(EU) တို့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရေးဆွဲပြီးစီး သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ထိုသင်ရိုးသစ် သင်ပြနည်းအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများကို သင်တန်းပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး ဗဟိုအဆင့်၊ ကျောင်းအ ဆင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းများအ တွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ ကိုဗစ် ကာ ကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုး သားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဟု ၎င်း က ဆိုပါတယ်။
အွန်လိုင်းသင်တန်းများအ တွက် တစ်ဦးချင်းစီသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့် တစ်ဦး ချင်းစီ အိမ်၊ ရုံး စသည့်နေရာသီးသန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး Face to Face Training ဖွင့်လှစ်ပါက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး လူ ၃၀ ထက်မပိုဘဲ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီးက ဆိုပါတယ်။
ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ကြောင့် ကျောင်းများ ပိတ်ထားသော်လည်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ် ရေးဆွဲမှုများကို မရပ်တန့်ဘဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီး မူလသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာအတန်းအားလုံးအ တွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ကို အပြီးရေးဆွဲမည်ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ တင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ် ရေးဆွဲမှု၊ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရိုက်နှိပ်မှု များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အပြီးဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်သော် လည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူ များအား သင်ကြားမည့်အစီအစဉ်သည် ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့် သည့်အပေါ် မူတည်ကြောင်း ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။